Kongresy eokaristika nasiônaly : hatao any Antsiranana amin’ny 2020 » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Tambajotram-pivavahan’ny Papa Maneran-tany : fangatahana ho an’ny volana jolay
Hira Faneva JMJ Mada IX »
Kongresy eokaristika nasiônaly : hatao any Antsiranana amin’ny 2020
Ao anatin’ny fiomanam-panahy tanteraka hiatrehana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET isika ankehitriny ; antenaina fa samy manao izay azony atao ny rehetra amin’ny fampiharana ny Soridalana sy ny vokatry ny Filankevitra Nasionaly mifanandrify amin’izany. Ireto misy vaovao ifampizarana :
Kongresy Eokaristika Nasionaly
Nankatoavin’ireo Eveka Raiamandreny ao amin’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara fa dia hatao any Antsiranana, amin’ny taona 2020, ny Kôngresy Eokaristikan’ny AFAFI-FET ho fiaraha-mankalaza ny Taon-jobily faha 100 taona niorenan’ny FET teto Madagasikara. Koa samia miomana dieny izao amin’ny ho enti-manana izany. Mbola hisy ny andinindininy momba ny fisoratana anarana sy ny saran-dasy ary ireo fepetra mifanandrify amin’izany.
Vavaka noho ny taon-jobily faha 100 taona
Efa vonona ny Vavaky ny taon-jobily faha 100 taona ary efa nahazo ny fankatoavan’ny Eveka filohan’ny CEPAL, Mgr Phillipe RANAIVOMANANA, koa anentanana ny mpikambana tsirairay, ny Ekipa fototra, ny Ekipan’ny Diosezy amin’ny fampielezana sy ny fanaovana isan’andro ny Vavaka. Raha vantany vao voaray ny Vavaka dia hatomboka avy hatrany ny fanaovana izany ho antsika AFAFI-FET any amin’ny fivoriana any. Ny andro fankalazana ny Sakramenta Masina, amin’ny taona 2019, sady fanokafana ny taon-jobily kosa vao hatolotra ny Fiangonana na ny Paroasy izany mba hiaraha-manao ao am-piangonana.
Mbola hisy Sary Masina ahitana io Vavaka io karakarain’ny Foibe Nasionaly, ka azo atao ny manafatra izany aty amin’ny Foibe aorian’ny fahavitàny. Holazaina amin’izany ihany koa ny vidiny.
Tags: FET 100 taona